Guuddoomiye Cawad: Dooni meyno in ay Puntland hal tilaabo dib uga noqoto meesha ay gaartay – Kalfadhi
Guuddoomiye Cawad: Dooni meyno in ay Puntland hal tilaabo dib uga noqoto meesha ay gaartay
Guddoomiye Kuxigeenka 2-aad ee Golaha Shacabka, Mahad Cabdalla Cawada, ayaa sheegay inuu aad uga naxo iney Puntland dhibaato ku hayso Daacish iyo Al-Shabaab. Waxa uu sheegay in ka dowlad ahaan, iyagoo Muqdisho ku qabay dhibtaas oo kale, aysan u dulqaadan karin in ay maqlaan dhibaatada Puntland ka haysata labadaas urur-dagaal. “Waan ka naxnaa, Xamar baa qaraxyo iyo dhibaato nagu haystaanee, marka la yiraahdo Boosaaso agagaarkeedaa waxaa isku dilaya Daacish iyo Al-Shabaab” ayuu yiri Guddoomiye Mahad Cabdalla Cawad.
Isagoo ka hadlayey Munaasabaddii Caleema Saarka Madaxweynaha Puntland iyo Kuxigeenkiisa oo xalay ka dhacday Garoowe ayuu Guddoomiyuhu sheegay iney Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS) la gudboon tahay in meeshii Soomaaliya ka tirsan oo nabad ahna ay nabaddeedaas ku hayso, meeshii aan ahayna lagu soo dabbaalo nabad. “Haddaan nahay Golaha Shacabka, waxaanu Madaxweynaheena iyo Xukumadda Federaalka aad iyo aad ugu boorineynaa in Puntland hormarkii ay gaartay aysan hal tilaabo dib uga noqon” ayuu yiri Guddoomiye Cawad.
Hadalkaas hortiisa ayuu Cawad soo sababeeyey sida ay Puntland u soo garab istaagtay iney DFS noqto dowladda maanta ay Soomaaliya haysato. Isaga oo xaaladihii maaliyadeed ee ay DFS soo martay iyo kaalinta Puntland xusaya ayuu yiri “Dowladda Federaalka maanta miisaaniyaddeedu saddex boqol iyo haa-haa milyan weeye. Meeshaan ka soo bilownay waxay ahayd laba boqol oo kun oo Doolar, oo aanu ka heli jirnay dekedda Boosaaso”.
Guddooomiye Cawada waxaa, isaga oo taas sabab uga dhigaya iney DFS garab istaagto Puntland, uu sidoo kale yiri “maanta, Puntland waxay istaahishaa in dib wax loogu soo celiyo”. Markaas kadib ayuu Cawad sheegay in haddii ay Madaxda Soomaalidu wada shaqeyn weyso uu cadawgoodu u diyaarsan yahay inuu ka faa’iideysto fursadaha halkaas ka imaanaya. “Cadawga Soomaaliyeed hal weeye- inta aanu isku jeedno, oo aanu isfiirsaneyno, iyaguna waa sii balaaranayaan, shacabkeenuna tahdiid inuu galo dooni meyno” ayuu yiri Guddoomiye Kuxigeenka 2-aad ee Golaha Shacabka.
Waxa uu hadalkiisa kusoo gunaanuday in, sida uu u arko, ay Soomaaliya isku filan tahay, “waase haddii” buu yiri “ay garato”. “Waan isku filanahay- ammaankayaga waanu ku filanahay; dhaqaalahayagu waa nagu filan yahay, xigmaddayada iyo caqligayaga waa nagu filan yihiin; in yaroo towfiiq ahaan u baahanahay” ayuu yiri Guddoomiye Mahad Cabdalla Cawad.
Afhayeenka Aqalka Sare: Shacabku uma baahna kala adkaansho ee wuxuu u baahan yahay wada adkaansho